dmenu: mpandefa fampiharana maivana indrindra | Avy amin'ny Linux
dmenu: mpandefa fampiharana somary maivana
dmenu dia mpandefa menio haingana, mavitrika ary maivana ho an'ny X. Azo oharina amin'ny Quicksilver amin'ny OS X, na miaraka Launchy amin'ny Windows. Miaraka amin'ny tsindry bokotra iray dia miseho ny menio dmenu, mamela anao ANDININ- ny anaran'ny fandaharana izay tianao baomba.
dmenu dia hita ao amin'ny trano fitehirizan'ny distro malaza rehetra. Raha hametraka azy amin'ny Arch sy ny derivatives dia miditra:
Ny ambiny, afaka mitodika any amin'ny Synaptic foana ianao hahitanao ny fonosana misy an'io fitaovana io. Ao amin'ny Debian, Ubuntu ary ny derivatives ny fonosana hapetraka dia antsoina hoe pdmenu.
Raha vao apetraka dia asaina manome hotkey ho an'ny dmenu. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny tontolon'ny birao (GNOME, KDE, XFCE, Openbox, sns.), Na miaraka amina programa toa ny xbindkeys.
Mba hanovana ireo toe-javatra dmenu mahazatra (loko font, background sns.) Dia afaka mamorona script ianao ary mihazakazaka toy izao:
Ity script manaraka ity dia manolotra fanaingoana mahazatra. Tehirizo any amin'ny toerana iray ilay script (~ / bin dia safidy tsara) ary omeo alàlana hanatanterahana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » dmenu: mpandefa fampiharana somary maivana
Shupacabra dia hoy izy:
Tena tsara raha afaka manandrana azy alohan'ny hametrahana azy, zavatra toa ny fitsangatsanganana kanônika vaovao, tsy maintsy manao tetikasa mitovy amin'izany isika amin'ny tontolo iainana sy ny mpandefa tontolo rehetra.
Mamaly an'i Shupacabras
Hitako fa mahasoa azy saingy tsy tiako ny typeface ampiasainy
Azo atao ny manova ny endritsoratra default. Jereo ny ohatra hita eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Oscar Dario Trujillo Tejada dia hoy izy:
Amin'ny debian ary heveriko fa amin'ny andohalambo koa, ity dmenu_run izay mampihena ny haben'ny script, mieritreritra aho fa azo takarina bebe kokoa toa izany, na dia mitovy aza ny vokany amin'ny tranga roa tonta.
Efa nandramako io ary heveriko fa tsy miova ary hijanona amin'ilay efa nataoko taloha «gmrun», hafa ny fomba fanatanterahana, izay tsara kokoa amin'ny dmenu, fa ny gmrun dia mamela, amin'ny andalana iray ihany, hamita bebe kokoa zavatra fa tsy ny teny voalohany fotsiny
PS: raha te hanova ny endri-tsoratra ianao dia afaka mahazo ny anaran'ilay endri-tsoratra, ny fomba fampiasan'ny dmenu azy, miaraka amin'ny baiko xfontsel, somary hafahafa ihany, nefa vao mamaky endritsoratra izy
Valiny tamin'i Oscar Dario Trujillo Tejada
Toy ny faly amin'ny gmrun ihany, manana izany aho rehefa miditra amin'ny IceWm.
Azonao atao ny mametraka azy ao amin'ny alt + f2 hehe
Osvaldo Martin dia hoy izy:
na amin'ny Do na Synaptic amin'ny Linux ...
Valiny tamin'i Osvaldo Martin
pikantsary an'ny Fluxbox ny sary, sa tsy izany?
tena tsara, fa mijanona amin'ilay Alt + F2 malalako aho, haingana kokoa noho ity tsy azo atao ity.
Lazao amin'ny mpampiasa OpenSUSE hampiasa Synaptic heh heh
nutux dia hoy izy:
Toa mahaliana. Saingy ... ahoana ny fampiasana azy rehefa tafapetraka?
Rehefa manatanteraka azy dia misy tsipika mainty miseho, ary rehefa manoratra tsy misy fenoina.
Mila mampiditra angon-drakitra a priori ve ianao?
Mamaly an'i nutux
Vodafone WebBook, ny netbook miaraka amin'ny Ubuntu avy amin'ny Vodafone
Ny vatan'olombelona miaraka amin'ny HTML sy PHP